Soomaaliland oo digniin u dirtay Mas’uuliyiinta shaqada ka waaya deegaanadeeda ee Xilka u Doonta Muqdisho? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Soomaaliland oo digniin u dirtay Mas’uuliyiinta shaqada ka waaya deegaanadeeda ee Xilka...
Soomaaliland oo digniin u dirtay Mas’uuliyiinta shaqada ka waaya deegaanadeeda ee Xilka u Doonta Muqdisho?
Wasiirka Arimaha dibadda Maamulka Soomaaliland Sacad Cali Shire oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada hargeysa ee Xarunta Maamulka Soomaaliland ayaa digniin u jeediyay Mas’uuliyiinta xilka laga qaado ee ka tirsan Soomaaliland iyo kuwa shaqada ka waaya maamulkaasi kadibna u soo safra Magaalada Muqdisho.
Wasiir Sacad ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in mas’uuliyiinta xilka ay ka qaadaan iyo kuwa hamigii ay la haayeen ka waaya Soomaaliland in ay xilal ka qabtaan Dowlada dhexe ee Soomaaliya isagoo ku tilmaamay kuwa gatay qarimadooda.
Soomaaliland oo sheegata In ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ayaa Mas’uuliyiin badan oo ka soo jeeda waxay xilal kala duwan ka haayaan Dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo qeyb ka ah Nidaamka Awood qeybsiga Soomaaliya.